Ụlọ ọrụ mgbapụta anyanwụ, ndị na-ebunye - ndị na-emepụta ihe mgbapụta anyanwụ nke China
A na-eji eme ka mmiri dị elu.Kwe ka ebufe mmiri gaa n'ogo dị elu yana nnukwu.Na-arụ ọrụ na ike anyanwụ, ọ bụ usoro mmiri na-adọrọ adọrọ na mpaghara ndị nwere anyanwụ nke ụwa, karịsịa na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na-enweghị ọkụ eletrik.
PUMPS anwụ anwụ
Igwe nfuli anyanwụ na-agbada na-eji ike anyanwụ na-agbapụta na ibufe mmiri.Ọ bụ mgbapụta na-emikpu n'ime mmiri.Ọ bụ usoro inye mmiri kacha mma na mpaghara anyanwụ nke ụwa taa, ọkachasị n'ime ime obodo na-enweghị ọkụ eletrik.A na-eji ya eme ihe n'ụzọ bụ isi maka inye mmiri ụlọ, ịgba mmiri n'ubi, ịgbara ubi ubi na ihe ndị ọzọ.
Anyanwụ ọdọ mmiri nfuli na-eji anyanwụ ike ụgbọala ọdọ mmiri nfuli.Ọstrelia na mpaghara mpaghara anwụ na-acha na-amasị ya, ọkachasị n'ime ime obodo na-enweghị ọkụ eletrik.A na-ejikarị ya na usoro mgbasa ozi mmiri nke ọdọ mmiri na ebe ntụrụndụ mmiri.
PUMES MMIRI MMIRI
Ọ bụ mgbapụta nke a na-emikpu n'ime olulu mmiri dị n'ime ala maka ịkwanye na ibuga mmiri.A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ime mmiri ụlọ, ogbugba mmiri n'ubi na drainage, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na-egwuputa ihe, mmiri na-ekpo ọkụ n'obodo ukwu na drainage.
Igwe ọkụ anyanwụ 30M DC na-ekpo ọkụ na-ebufe mmiri rọba plastik.
Aha ika: Qingeal pump
Nọmba nlereanya: 4FLP4.0-35-48-400
Ebe Mmalite: Zhejiang, China(Mainland)
Ngwa: Ngwọta mmiri ọṅụṅụ, Irigation na Agriculture, Machining
Ike inyinya: 0.5 ike
Nrụgide: nrụgide dị elu, nrụgide dị elu
4INCH PuMP DIAMETER HIGH FOW SOLAR PUMPS DC Mmiri mmiri miri emi.
Nọmba nlereanya: 4FLD3.4-96-72-1100
Ịnyịnya ike: 1100W
Voltaji: 72V, 72V